Trump oo dhaliilay Pakistan sheegayna inuu si socon doono dagaalka Afghanistan | Maalmahanews
Trump oo dhaliilay Pakistan sheegayna inuu si socon doono dagaalka Afghanistan
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa markii ugu horeysay soo bandhigay qorshihiisa ku aadan dagaalka ka socda dalka Afghanistan oo ah kii ugu dheeraa oo ay galaan ciidamada Maraykanka.
Trump oo khudbadiisan kasoo jeediyey saldhiga militariga ee ku yaal Arlington, gobalka Virginia, ayaa sheegay in Maraykanka uusan hada ciidamadiisa kala soo bixi doonin wadanka Afghanistan.
Ciidamada Maraykanka ee ku sugan Afghanistan ayaa dagaalka ku jira hada muddo 16 sano ah iyagoo aan weli ka guuleysan xoogaga Talibanka ee dalkaasi ka dagaalamaya.
Xukuumadii hore ee Obama ayaa horey u dajisay in hoos loo dhigo tirada ciidamada dalkaasi jooga oo hada gaaraya in ka badan 8 kun, balse Trump khudbadiisan kuma sheegin tirada ay ku kordhin doonaan ciidamadaasi.
“Hadii aan kasoo baxno dalka Afghanistan waxay halkaasi xarun u noqon doontaa kooxaha argagaxisada sida Talibanka iyo ISIS.” ayuu yiri Trump oo dhinaca kale dhaliil kala dul dhacay wadanka Pakistaan oo ay xulafada yihiin.
Wuxuu ku eedeeyey Pakistaan inay gabaad siiyaan kooxaha argagaxisada, arrintaasina aysan sii socon karin, wuxuuna ugu baaqay xukuumada Islamabad inay si daacad ah ulla shaqeeyaan Maraykanka. Trump ayaa dhinac kale Amaanay dowlada India oo uu sheegay inay diyaar u tahay inay gacan kasiiso xasilinta Afghanistan.